Valiny haingana: Afaka mahandro burgers mialoha ve ianao? - Mahandro aho
Valiny haingana: Afaka mahandro sakafo burger mialoha ve ianao?
Afaka manafana hamburger ve ianao?
Ahoana no hataonao mba hitazomana ny burger vaovao rehefa avy nandrahoina?
Ahoana no hitazonana burgers ho mando aorian'ny fandoroana?
Inona no azoko atao amin'ny paty hamburger sisa tavela?
Afaka manafana burger Mcdonalds ve ianao?
Ahoana no fomba fahandroako burger nefa tsy maina azy ireo?
Ahoana no hataonao mando hatrany ny burger rehefa masaka?
Azonao atao ve ny mitazona hafanana ao anaty crockpot?
Fa maninona no asiana gilasy gilasy amin'ny burger?
Inona no tsiambaratelo momba ny burger be ranony?
Mandra-pahoviana no tokony handrahoana burger?
Mandra-pahoviana ny hamburger sisa tavela?
Inona no azoko atao amin'ny burgers sy alika mafana?
Inona no tokony hotompoiko amin'ny hena hamburger?
Amin'ny fotoana hampiantranoanao vahiny dia hevero ny mahandro ny burger-nao mandritra ny ora vitsivitsy mialoha ary tahirizo anaty rano mandra-pahatongan'ny fotoana hisakafoanana. … Ataovy anaty paty ny burger-nao ary tahirizo ao anaty vata fampangatsiahana hatramin'ny 24 ora. Mamafaza sira sy dipoavatra amin'ny lafiny roa amin'ireo paty alohan'ny handrahoana.
Hafanaina indray ny burger amin'ny fampiasana lafaoro
Ny fomba tsara indrindra hamerenana ny burger dia ny fampiasana lafaoro. Ity no fomba mora indrindra sy mahomby indrindra amin'ny fanafanana ny bun sy ny patty raha tsy esorina ny tsirony. Ny fampiasana ny lafaoro dia manampy anao hankafy ilay burger toy ny hoe vao manomboka amin'ny grill. Afanaina hatramin'ny 400 degre Fahrenheit ny lafaoro.
Aorian'ny fandrahoana hamburger dia azonao atao ny manafana azy ireo ao anaty lafaoro efa nafana hatramin'ny 200 degre Fahrenheit. Rehefa mahandro burger ho an'ny vondrona marobe dia azo atao ny manafana azy ireo mandra-pahavitan'izy rehetra. Ny famelana azy ireo hangatsiaka dia mahatonga azy ireo tsy hihinana firy ary, ny tena zava-dehibe, dia atahorana ny aretina azo avy amin'ny sakafo.
MAHALALA IZAO: Frequent question: Should I put olive oil on steak before grilling?
Raha maniry hamburger be ranony ianao dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny sasany amin'ireo hamandoana very io. Ny fomba mora indrindra dia ny manampy rano na ranoka hafa amin'ilay fangaro burger. Hitanay fa ny rano mangatsiaka 2 na 3 sotro fihinana afangaro amin'ny henan'omby iray kilao dia mampitombo be ny ranon'ireo burger voaendy.
Fomba 11 hampiasana hamburger sisa tavela
Cheeseburger Pasta. Omano ny fomba fahandro makaroni sy fromazy tianao indrindra. …
Pie mpiandry ondry. …
Cheese hena masaka (aka Patty Melt)…
Sandwiches "Meatball". …
Hamburger steak miaraka amin'ny gravy. …
Dipoavatra voaroy. …
Cheeseburger sy Omelet an-trano. …
Ny hafetsena hamerenana tsara azy ireo dia ny mametraka azy ireo ao anaty lafaoro misy ny taratasy mandritra ny 35 segondra. Ity fika ity dia tonga lafatra amin'ireo andro izay vao mifoha ianao mila cheeseburger matavy.
Aza mampiasa afa-tsy hen'omby, sira sy dipoavatra. …
Mila mitazona ny hena amin'ny tany mangatsiaka araka izay azo atao ianao, mba hisorohana ny tavy tsy hiempo ao alohan'ny handrahoanao azy. …
Asio sira any ivelan'ny burger adiny 1 eo ho eo alohan'ny handrahoana sakafo.
Makà lapoaly tsara (tsara kokoa ny fantsom-by vy) tena mahamay tokoa.
Nasiako lamba famaohana somary mando kely eo anelanelan'ny paty burger tsirairay mba hitazomana azy ho mando sy hampangatsiaka. Raha toa ianao ka hametraka azy ireo eo amin'ny giro lava mba hanafana azy ireo avy amin'ny vata fampangatsiahana sy ny fromazy miempo, dia azonao atao ihany koa ny mahandro azy ireo mandritra ny fety.
MAHALALA IZAO: Valiny tsara indrindra: Tsy maintsy manasa broccoli ve ianao alohan'ny handrahoina?
Ity ny valinteninao: azonao atao ny manafana ny hamburger masaka hataonao amin'ny alàlan'ny fahandroana miadana. Mba hanafanana dia apetraho ao anaty lafaoro miadana ny hamburger ary asio rano. Ataovy mafana ny hafanan'ny cooker slow.
Ny goba gilasy dia hisoroka ireo burger tsy ho masaka ary hanampy hamandoana fanampiny amin'ny hen'omby - zavatra tena manampy raha mitono paty lehibe ianao. Ny hataonao dia maka baolina hen'omby iray, tsindrio moramora kely cubes kely eo afovoany, ary aforeto manodidina ny hen'omby mba hasiana tombo-kase.
Ireto misy torohevitra nomen'ny chef hamoahana ny burger farany fampisehoana:
Mampiasà chuck ground 80/20. …
Manaova fehin-tanana eo afovoan'ny paty. …
Manaova sira sy dipoasy IHANY. …
Mampiasà menaka canola, vy vy ary hafanana be. …
Atsimbadika indray mandeha. …
Raiso tsara ny mari-pana. …
Aza matahotra mampifangaro fromazy. …
Ampio rano handrendahana ny fromazy.
Apetraho eo amin'ny grill grills ny burger ary andrahoy, andraso farafahakeliny 4 minitra alohan'ny hikoropahana. Andrahoy mandra-pahavoky ny andaniny roa ary ny burger dia masaka amin'ny fahavononana irina, 10 minitra eo ho eo ho an'ny burgers tsy fahita firy, 8-ounce. Avela hijanona mandritra ny 5 minitra eo ho eo ny burgers alohan'ny hanompoana.
Raha atao vata fampangatsiahana avy hatrany ny henan'omby aorian'ny fandrahoana azy (ao anatin'ny adiny roa; adiny iray raha mihoatra ny 90 ° F ny mari-pana dia azo atao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny telo na efatra andro eo ho eo. Raha mangatsiaka dia tokony hitazona ny kalitaony mandritra ny efa-bolana.
MAHALALA IZAO: Inona no mitranga raha mampiasa menaka mahandro ao anaty fiaranao ianao?
Ampiasao ireo ambiny mafana sy hamburger amin'ny alàlan'ny fanampiana azy ireo amin'ny:
macaroni sy fromazy.
Holatra Wild sy Beef Stroganoff.
Rigatoni miaraka amin'ny omby sy oliva maintso.
Hen'omby sy Portobello Stroganoff.
Voatabia voatoto miaraka amin'ny henan'omby mahia.
Pie mpiandry BBQ.
Bulgur sy Beef Stuffed Peppers.
Ny mari-pana kendrena ho masaka amin'ny saosisy manta dia 160 degre Fahrenheit, ary amin'ny
Inona no fomba tsara handrahoana paty? Torolalana Ao anaty vilany lehibe iray, ento
Haharitra 3 na 5 andro ao anaty vata fampangatsiahana ny broccoli voatahiry tsara sy masaka.
Torolàlana momba ny fandrahoan-tsakafo - Ankapobeny: Mba hahazoana vokatra tsara indrindra, mahandro avy amin'ny mangatsiaka. Tsy mila levonina.
Manta ve ny akoho mangatsiaka Kiev? Matsiro indrindra rehefa nendasina avy hatrany tao anaty vata fampangatsiahana ny lafaoro. ny
Valiny haingana: Manimba fibre amin'ny legioma ve ny sakafo?
Ny dingan'ny fandrahoana sakafo dia manimba ny sasany amin'ireo fibra ao aminy sy ny selan'ny zavamaniry
Mampihena soda ve ny ronono?
Mila masaka ve ny saosisy?
Ahoana no fahandroanao bacon be dia be?
Azonao atao ve ny mangatsiaka ny pies izay efa masaka?